कोरोना भाइरसको कारण रिपोटिङको क्रममा पाइएको यो कस्टदायी यात्रा ! – Complete Nepali News Portal
कोरोना भाइरसको कारण रिपोटिङको क्रममा पाइएको यो कस्टदायी यात्रा !
हाम्रो यात्रा निकै कस्टदायी रहेको थियो । खोलामा पुल बन्दै गरेको, मटरबाटोहरु पिच हुने क्रममा थिए, त कतै पाइप बिक्षाइएको थियो। यो आतंक फैलाईरहेको कोरोना भाइरसको कारण भने सबै काम ठप्प छन् ।
हेर्नुहोस यो कस्टदायी भिडियो